भोजपुरमा करको दायरामा आउने बढे
१७ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन
भोजपुर (अस) । भोजपुरमा करको दायरामा आउनेहरू बढेका छन् । गतवर्ष जिल्लामा करदाता सेवा कार्यालय स्थापना भएपछि करको दायरामा आउनेको संख्या उल्लेख्य बढेको कार्यालयले बताएको छ । जिल्लामा कार्यालय स्थापना हुँदा ३ हजार ८९३ करदाता रहेकोमा १ वर्ष अवधिमा २ हजार ३२१ नयाँ करदाता थपिएको कर अधिकृत कर अधिकृत रूपक न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘करदाताको संख्या करीब ५० प्रतिशतले बढेको छ,’ उनले भने, ‘यो करदाता सेवा कार्यालय स्थापना भएको सकारात्मक प्रभाव हो ।’
गत आर्थिक वर्षमा रू. १४ करोड १३ लाख ६६ हजार राजस्व संकलन भएको र कर तीन आउनेको संख्या जारी रहेकाले यो रकम अझै बढ्ने कर अधिकृत न्यौपानेले बताए । हालसम्म आयकर रू. ९ करोड ६८ लाख ३२ हजार, घर बहाल कर रू. १ करोड २४ लाख ७२ हजार, ब्याज कर रू. ८ लाख २५ हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर रू. ६ करोड २२ हजार र अन्त शुल्क रू. १८ लाख ५४ हजार संकलन भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
‘कार्यालय स्थापना भएर सेवा सञ्चालनमा आएपछि करको दायरामा आउनेहरू बढेका छन्,’ न्यौपानेले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महीना (साउन)मा मात्र रू. ३ करोड ४ लाख ४० हजार राजस्व संकलन भएको छ ।’
जिल्लामा कार्यालय स्थापना भएपछि भोजपुरका सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सहज भएसँगै करको दायरामा आउनेहरू बढिरहेको कार्यालयको भनाइ छ । विगतका दिनमा कार्यालय नहुँदा कर तिर्न तीन दिन लगाएर धरान धनकुटा पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर गत असोजमा कार्यालय स्थापना भएपछि त्यो अवस्था अन्त्य भएको स्थानीय दातेन्जी शेर्पाले बताए ।
कार्यालय आसपासमा बैंकका शाखा नभएकाले बैंक मार्फत राजस्व भुक्तानी गर्न केही झन्झट भएको गुनासो सेवाग्राहीको छ । नजिकै बैंकको शाखा स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । करदाता सेवा कार्यालयमा अनलाइन सेवा समेत सञ्चालन भएकाले २० लाखसम्मको कारोबार गर्ने निजी फर्म तथा उद्यमीले घरबाटै कर तिर्न सक्ने समेत कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।